Talanjona Tamin’ireo Fasana Mihantona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 13:34 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Italiano, English
(Fanamarihana; tamin'ny 17 Aprily 2016 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fasana mihantona any Toraja. Saripikan'i Arpan Rachman. Nahazoana alalana.
Mbola nolovain'ireo mponina taranaka nifandimby maro ao Toraja, Indonezia ny kolontsaina lehibe iray mahatalanjona. 350 kilometatra miala eo amin'ny trano fonenanay any Makassar ny mankany Toraja .
Iray amin'ireo toerana mahagaga ny fasana mihantona. Hita mihantona eny amin'ny rindrim-baton'ny tendrombohitra ny vatapaty. Misy varavarankely miaraka amin'ny varavarana mivoha eo amin'ny rindrin'ny vatolampy eo akaikin'ireo toerana hanantonana izany.
Mipetraka toy ny manara-maso ireo mpivahiny sy ny mpizaha tany ny sarivongan'ireo izay nalevina ao amin'ity toerana ity. Samy manao akanjo nentim-paharazana avy izy ireo. Tena masina sy feno misitery ireo loko samihafa….
Indray andro tany am-piandohan'ny volana Desambra, niaraka tamin'ireo diplaomaty sy ireo ambasadaoro avy any amin'ny firenena maromaro aho nitsidika ireo faritra Kete ‘Kesu sy Londa. Hita any amin'ny faritry ny tendrombohitra ireo toerana roa ireo, tsy lavitra an'i Rantepao, renivohitr'i Tana Toraja.
Tao Kete ‘Kesu, Londa sy tany amin'ireo toerana vitsivitsy tahaka an'i Batutumonga sy Bori, tsy mandevina ny fianakaviany maty ireo mponina fa manantona ny vatapaty amin'ny rindrim-bato kosa izy ireo.
Toy ny mihantona ny fahita ireo vatapaty kanefa rehefa dinihina akaiky kokoa izany dia nahankina sy nafatotra tamin'ny rindrim-bato izany ary misy tsatoka roa mihazona azy avy ety ambany. Tsy vatapaty iray ihany no ahitana razana amin'ireo tsatoka mitandahatra ireo.
Efa an-jato taonany maro ireo razana tranainy, saingy misy ihany koa ny fasana vaovao. Ankoatra izany, nahitana karandoha miisa dimy tsy misy kianina milahatra eo ambadiky ny tohatra mankeo am-bavan'ny zohy manakaiky ny vatapaty misokatra iray misy taolana izay toa vao nihintsana tamin'ny fihantonany tsy ela akory.
Nisy vatapaty kely iray teo anjoron'ny lavaka teo am-pidirana mankao amin'ny zohy maizina tao Londa. “Zazakely no milevina ao,” hoy ny mpitari-dalana anay, nitondra jiro kely izy nanazava ny zohy tao anatin'ny haizina.
“Maneho kolontsaina tena miavaka ny fasana eto. Tena variana aho, “hoy i Vlastimil Samek, tale mpisolo toerana ao amin'ny Ivotoerana momba ny Fampahalalam-baovaon'ny Firenena Mikambana, rangahy iray fotsy volo sola loha misy volom-bava. Nilaza izy fa mahita zava-baovao hatrany isaky ny mivezivzey manerana an'i Indonezia.
Niaiky i Alice Mageza, ilay ambasadaorin'ny repoblikan'i Zimbaboe mitafy akanjo sarim-boninkazo maitso, manao solomaso mainty sy fehi-loha, fa talanjona tokoa izy tamin'ny hakanton'ny kolontsaina Toraja.
Nilaza toy izany ihany koa ilay ambasadaoron'i Vietnam, Hoanh Anh Thui, manao lobaka mitsipitsipika izay tsy miala any anatin'ny kitapony mihitsy. “Anisan'ny kolontsaina lehibe ity fasana ity ary mbola mitazona izany izy ireo hatramin'izao,” hoy izy. “Midika izany fa voatahiry ity kolontsaina ity.”